उड्न नसक्ने १० चराहरू | Yopoho Directory
उड्न नसक्ने १० चराहरू
चरा भन्ना साथ हाम्रो मस्तिष्कले आकाशमा उड्ने जन्तुको बारेमा कल्पना गर्छ, तर संसारका सबै चराहरू आकाशमा उड्दैनन् । यस संसारमा केही यस्ता चराहरू पनि छन् ,जो उड्न सक्दैनन् र दुई खुट्टा टेकेर हिँड्ने गर्छन् । ती चराहरूको विवरण यसप्रकार छ ।
उड्न नसक्ने चराहरूको सूचिमा अस्ट्रीचको नाम सबैभन्दा पहिला आउँछ । यो संसारको सबैभन्दा ठुलो चरा हो । यसको तौल ६३ केजी देखि लिएर १४५ केजी सम्म हुन्छ । यो ७० कि.मी. प्रति घण्टाको गतिमा दौडिन सक्छ । यस हिसाबले यो जमिनमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा दौडिने चरा हो । यसको अण्डा पनि अन्य चराहरूको तुलनामा सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, यो ४० देखि ४५ वर्ष सम्म बाच्छ ।
यो संसारको दोस्रो ठुलो चरा हो । यो अस्ट्रेलियामा पाइन्छ । यसको उचाइ ६.२ फिट सम्म हुन्छ । यो ५० कि.मी. प्रति घण्टाको गतिमा दौडिन सक्छ । यसको अण्डा गाढा हरियो रङ्गको हुन्छ र यसको अण्डाको तौल ४५० ग्राम हुन्छ ।
यो चरा अस्ट्रेलिया र पपुवा न्यूगिनीमा पाइन्छ । यसको ४ वटा प्रजाति पाइन्छ, दक्षिणी कासोवेरी, ड्वार्फ कासोवेरी, उत्तरी कासोवेरी र पिग्मी कासोवेरी । जसमध्ये पिग्मी लोप भई सकेको छ । हाल संसारमा दक्षिणी र उत्तरी कासोवेरी मात्र पाइन्छ । यसको तौल १७ केजी देखि ७० केजी सम्म हुन्छ । यसको लम्बाइ ४ फुट देखि ५ फुटसम्म हुन्छ ।
यो दक्षिण अमेरिकाको चरा हो । यसको ३ वटा प्रजाति छ अमेरिकन रेया, डार्बिन्स रेया र पुन रेया । अमेरिकन रेया ५ फुटसम्म अग्लो ४० केजी सम्म तौल हुन्छ । डार्बिन्स रेया सबैभन्दा सानो प्रजाति हो । यो ३ फिट सम्म अग्लो हुन्छ । यसको भालेले गुँड बनाउँछ र पोथीले अण्डा पार्छे । त्यसलाई भालेले ओथार्छ र मात्र ३६ घण्टामा अण्डाबाट चल्ला निस्किन्छ ।
पेन्गुइन पानीमा पौडिने तर उड्न नसक्ने चरा हो । यसको सबैभन्दा ठुलो प्रजाति इम्पेरर पेन्गुइन हो, जुन ३ देखि ७ इन्च सम्म लामो हुन्छ र यसको तौल ३५ केजी सम्म हुन्छ यसको सबैभन्दा सानो प्रजाति लिटल ब्लू पेन्गुइन हो, जसको आकार ४० से.मीे. र तौल १ केजी सम्म हुन्छ ।
यो न्यूजिल्याण्डको चरा हो । यसलाई वुड हेन पनि भनिन्छ । यसको तौल ५०० ग्राम देखि लिएर १.६ केजीसम्म हुन्छ । यसको आकार २० देखि २४ इन्च सम्म हुन्छ । यसले कुखुराले जस्तै अन्न, किरा फट्याङ्ग्रा खाने गर्छ ।
यो पनि न्यूजिल्याडमै पाइने चरा हो । यसको आकार २५ इन्च् सम्म र तौल २.७ केजी सम्म हुन्छ । हाल यो चरा लोप हुने स्थितिमा छ ।
किवी आफ्नो प्रजातिको सबैभन्दा सानो चरा हो । यसको आकार कुखुरा जत्रै हुन्छ । यसले शरीरको हिसाबले संसारको सबैभन्दा ठुलो अण्डा पार्छ । यसको अण्डाको तौल लगभग ३ केजी र लम्बाइ ४५ से.मी. सम्म हुन्छ । यसको अण्डा कुखुराको भन्दा ६ गुणा बढी ठुलो हुन्छ । पोथी किवीको शरीरको १÷४ भाग बराबर अण्डा हुन्छ । यो पनि न्यूजिल्याडमा पाइन्छ ।
ककपो सुँगाको प्रजातिको चरा हो, जुन उड्न सक्दैन । यसलाई उल्लु सुँगा पनि भनिन्छ किनकि यसको अनुहार उल्लु जस्तै हुन्छ । यो संसारको सबैभन्दा ग¥हौ सुँगा हो । यसको तौल १ केजी देखि ४ केजी सम्म हुन्छ । यो २३ देखि २५ इन्च लामो हुन्छ । यो पनि न्यूजिल्याडमा पाइन्छ । यसको विशेषता के छ भने जब सम्म पोथीको तौल १.५ केजी हुँदैन यसले प्रजनन गर्दैन ।
कोर्मोरेन्टको धेरै जसो प्रजातिहरू उड्न सक्छन् । तर फ्लाइटलेस कोर्मोरेन्ट भने उड्न सक्दैन । यसको लम्बाई ३५ देखि ३९ इन्च सम्म हुन्छ र तौल २.५५ केजी सम्म हुन्छ ।
Previous: सफल हुन भगवान् श्रीरामका गुणलाई आदर्श बनाउनुहोस्
Next: शब्दको शक्ति (प्रेरक कथा)